Igumbi lakho lokulala e i-loft sinombuki zindwendwe onguDiane
IRiver Bush View isembindini welali yaseBushmills, emi elunxwemeni loMlambo iBush. Iivenkile/ iiBar kunye neRestaurants kanye ngaphandle. Ukude nemizuzu ukusuka kwi-Giant's Causeway, iCarrick-a-Rede Rope Bridge, iDunluce Castle & Ballintoy Harbour (Umdlalo weZitulo zobukhosi) kunye neBushmills Distillery ngaphandle nje komnyango wangaphambili. Abamelwane bethu ziihempe ezi-2 ezihlala ebhankini echaseneyo kwaye siva rhoqo ii-otters ngokuhlwa kwaye sizibukele zidlala kwingxangxasi kusasa ekuseni.
Indawo yethu ephezulu ihonjiswe ngokunambitheka ukwenza iindwendwe zethu zizive zamkelekile kwaye zisekhaya (i-Loft inophahla olugxothiweyo ngoko kukho uthintelo lobude kwiindawo ezithile ngoko ke ayibafanelanga abantu abade) Iifestile ezi-4 ezinembono phezu komlambo zenza igumbi likhanya kakhulu kwaye linomoya. Sisembindini wedolophu nazo zonke iivenkile zayo, iihotele kunye neendawo zokutyela. Ukufikelela ngokuthe ngqo kulo lonke uhambo oluhle lonxweme kunye nokuhlola iCauseway Coast. Ukuthuthuzela nokuphumla kwakho kwigumbi lakho labucala siye sanikezela ngeepleyiti, iiglasi zewayini, amakhandlela, iicondiments njl. IiBathrobes ziyafumaneka kwishawa yakho, sibonelela ngazo zonke izinto zangasese kunye nesomisi seenwele / esolula. Siphinde songeza i-Netflix kwi-TV kwigumbi lakho kwaye kukho i-Alexa soundock yomculo njl. Uyakwamkeleka kakhulu ukuba usebenzise i-patio yeziphuzo okanye intlanzi kunye ne-chips!
4.98 ·Izimvo eziyi-268
4.98 · Izimvo eziyi-268
Sikumizuzu kude kwi-Giants Causeway, Carrick -A-Rede Rope Bridge, Dunluce Castle & Ballintoy Harbour ( Game of Thrones filmed ) IBushmills Distillery ( ikufanele utyelelo ) jkust ngaphandle komnyango wangaphambili. Iikhosi ezininzi zegalufa ezinqwenelekayo ngaphakathi kwemizuzu Royal Portrush (ibambe i-Open 2019) Portstewart (ibambe iIrish Open 2017) Castlerock & Ballycastle ukukhankanya ezimbalwa. Kumdlalo oqhelekileyo weBushfoot Golf Club ejikeleze ikona yikhosi enkulu yemingxuma eyi-9 eneembono ezimangalisayo ngaphezulu kweRunkerry Beach iBar/Restauraunt ivulekele abangengawo amalungu.
Xa sikhona siyavuya ukukunceda ukonwabele ukuhlala kwakho, cebisa kuzo zonke iindawo ezinomtsalane kubakhenkethi basekhaya kwaye sinikeze iilifti ukuba sinakho. Sikwanalo nolwazi olulungileyo lohambo olukhulu lwaselunxwemeni kwaye sinokucebisa iindawo zokutyela ezininzi ezintle. Sikwayazi kakuhle iIreland kwaye sinokucebisa iindawo ezintle zokundwendwela. Indawo yokutyela yaseTartine ingaphaya kwendlela benza imenyu emnandi yeentaka bacetyiswe ukuba babhukishe kwangethuba. Singacebisa kakhulu iBushmills Inn kwisidlo sangokuhlwa / iziselo awuzukuphoxeka.
Xa sikhona siyavuya ukukunceda ukonwabele ukuhlala kwakho, cebisa kuzo zonke iindawo ezinomtsalane kubakhenkethi basekhaya kwaye sinikeze iilifti ukuba sinakho. Sikwanalo nolwazi o…